I-Tranquility Bay Newfoundland... - I-Airbnb
I-Tranquility Bay Newfoundland...
Dildo, Newfoundland and Labrador, i-Canada
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Greg
Sethula i-Tranquility Bay - igugu eliseduze nasekhaya.
Indawo yethu eyingqayizivele engamahektare amabili ihlinzeka nge-ambiance ye-Cape Cod Beach House nje ngehora elingu-1 ukushayela usuka e-St. Ifaka negumbi elivulekile elimangalisayo elinendawo yomlilo eyi-14ft, ubhavu oshisayo, ukubukwa okumangalisayo kwe-Trinity bay kanye nolwandle oluyimfihlo ukuze ujabulele umlilo wekamu othokomele.
Umbono wethu we-Tranquility Bay kwakuyindlu yaseCape Cod Beach kodwa indawo iyamangalisa ngendlela yayo ekhethekile futhi iyingqayizivele ngempela. NJALO NGEMPELASONTO kusukela ngoJuni kuya ku-Okthoba 2016 singabuka imikhomo, amahlengethwa noma i-tuna sisendaweni engaphambili. Kukhona isidleke sokhozi esiseduze (isikhulu salo!) futhi izimvu zamanzi zazikhona ekuqaleni kwesizini futhi. Ibhishi eliyimfihlo liyamangalisa, i-caplin yagingqika ngasogwini ngesikhathi senyanga yokuqala egcwele ngoJulayi futhi abafana bethu bavele babakhipha emanzini ngenethi ebanjwa ngesandla. Ungakwazi ukubamba "ama-connors" angapheli ukusuka nje ogwini futhi ukuhlola nokuzidela kumane kuqhubeke. Ungakhohlwa ukwehla emadwaleni uye "efihliwe" "i-Treasure Beach" yethu....
Lesi sakhiwo besingahlukaniswa kalula ukuze siqashe izikhala ezimbili ezihlukene ngesikhathi esisodwa, kodwa sakhetha ukumelana nayo. Kukhona amakhaya amabili aphelele lapha, kodwa siyawaqasha njengomunye. Sinikela ngephansi eliyinhloko lendlu enkulu (esanda kulungiswa ngokuphelele) kanye nendlu yokugezela yesi-2 kanye negumbi lokuhlala lesibili kunoma ubani oliqashile njengekhaya lokulala eli-3. Emaqenjini amakhulu, sinikezela ngesitezi sesi-2 esihlanganisa okunye okugeza okungu-1 no-1/2 kanye namagumbi okulala angu-3 ngaphezulu aphinda kabili indawo yokuhlala.
Siyatholakala ukuze siphendule imibuzo futhi singathintwa kalula ngaphambi nangesikhathi sokuhlala kwakho. Ngeke sibe khona esizeni ngaphandle kokufika nokuhamba kwakho.
I-Dildo, NL iyindawo encane ejabulisayo. Kuyinto engavamile futhi engaphandle kwe-Newfoundland. Leli dolobhana elicishe libe yi-1200 linendawo yokudlela enhle, i-marina enhle, amakhefi, izitolo zezipho nokunye. Hamba uzungeze idolobha noma udlulele e-Anderson's Cove futhi uzizwele ogwini oluhle kakhulu esifundazweni!
I-Tranquility Bay cishe iqhele ngehora elingu-1 ukusuka e-St. John's. Izikhombisi-ndlela zinzima futhi sizozidlulisela ngesikhathi sokubhuka.
I-Tranquility Bay yinhle futhi uzomane uyithande lapha. Ngemuva kokulungiswa okubanzi ehlobo lika-2016, sizoqhubeka nokwengeza enduduzo kanye nezinsiza zendawo. Labo abagcina indawo ehlobo lika-2017 kufanele baqaphele ukuthi sizobe sakha idamu lokubhukuda elingase libe nomthelela ukuhlala kwakho ngendlela engalungile ngenkathi ukwakhiwa noma ngendlela ejabulisayo uma kuqediwe.
I-Dildo, NL iyindawo encane ejabulisayo. Kuyinto engavamile futhi quintessentially out of Newfoundland. Leli dolobhana elicishe libe ngu-1200 linendawo yokudlela enhle, marina amahle, amakhefi, izitolo zezipho nokunye. Hamba uzungeze idolobha noma udlulele e-Anderson's Cove futhi uzizwele ogwini oluhle kakhulu esifundazweni!
Le ndlu idinga u-$155 wemali ekhishwa uma isivakashi senze umonakalo. Izoqoqwa ngokwehlukana yisakhiwo ngaphambi kokufika kwakho noma lapho ungena.
Hlola ezinye izinketho ezise- Dildo namaphethelo